မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) မင်္ဂလာပွဲမှာ ဘယ်လိုမိတ်ကပ်ပုံစံနဲ့ ပြင်ဆင်လာမလဲ?
12 May 2018 . 3:56 PM
တော်ဝင်မင်းသားချော ဟယ်ရီနဲ့ မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) တို့ရဲ့ လာမယ့် မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မယ့် တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲသတင်းတွေကတော့ အခုအချိန်မှာ မင်္ဂလာကိတ်အရသာ ကအစ လာရောက်မယ့် ဧည့်စာရင်း၊ ဖြေဖျော်မယ့်သူတွေအထိ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သတို့သမီးက ဘယ်လိုမျိုး မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်လာမလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာကတော့ လုံးဝကို မသိရသေးဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ မီဂန်မာကယ်လ် (Meghan Markel) က ဘယ်လိုမျိုး မင်္ဂလာပွဲမှာ အလှပဆုံးပြင်ဆင်လာမှာလဲဆိုတာ အရင်မှန်းကြည့်ရအောင်။
သဘာဝကျကျနဲ့ Classic ပုံစံမျိုးပြင်ဆင်လာမယ်
မာကယ်လ်ရဲ့ မိတ်ကပ်ပညာရှင်အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ အတူရှိနေခဲ့တဲ့ Lydia Sellers ကတော့ မာကယ်လ်က သူမအခုနောက်ပိုင်း ပြုလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားကန့်သတ်ခြင်းမရှိတဲ့ Classic စတိုင် မိတ်ကပ်ကိုပဲ ဝတ်ဆင်လာဖြစ်မယ်ထင်တယ်လို့ People မဂ္ဂဇင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝကျကျတောက်ပနေတဲ့ အသားအရေနဲ့ ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့နှုတ်ခမ်း၊ Daytime Smoky Eye တွေနဲ့ လှပတဲ့မျက်တိုင်တွေနဲ့ မာကယ်လ်က လှပနေမှာပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
သူမရဲ့ အကြိုက်ဆုံးထုတ်ကုန်တွေကိုပဲ အသုံးပြုမယ်
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ မာကယ်လ်က သူမရဲ့ အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးသော အလှပဆိုင်ရာထုတ်ကုန်တွေကို အင်တာဗျူးတွေမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ YSL Touche Éclat Concealer ၊ Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Very Victoria ၊ NARS Orgasm Blush ၊ Dior Diorshow Iconic Mascara နဲ့ M.A.C eyeliner in Teddy တွေပါဝင်ပြီးတော့ အခုမင်္ဂလာပွဲမှာလည်း အဆိုပါ ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပဲ ပြင်ဆင်လာဖို့ များတယ်လို့ ခန့်မှန်းလာကြပါတယ်။ မာကယ်လ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သဘာဝထုတ်ကုန်တွေကို ရိုးရှင်းပြီး စစ်မှန်တာကြောင့် တန်ဖိုးထားပြီး သုံးစွဲတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း Sellers က ပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
သူမရဲ့ အသားအရေကိုအဓိကထားပြီး ပြင်ဆင်လာမယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ Refinery 23 နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ Sellers က မာကယ်လ်ကို မိတ်ကပ်ပင်ဆင်ပေးတိုင်း အောက်ခံဖောင်ဒေရှင်းတွေ အများကြီးသုံးတာကိုမကြိုက်ပဲ သူမရဲ့ တောက်ပနေတဲ့ ပင်ကိုယ်အသားအရေကိုပဲ အဓိကထားဖို့ ပြောဖူးတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ အခု မင်္ဂလာပွဲမှာလည်း မာကယ်လ်က သူမရဲ့ အသားအရေအတွက် အကြိုက်ဆုံးထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ Kate Somerville Quench Hydrating Face Serum ၊Bioré Daily Deep Pore Cleansing Cloths နဲ့ Tatcha Rice Enzyme Powder တွေကို အသုံးလာနိုင်ခြေများတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ကိတ်မစ်ဒယ်တန် (Kate Middleton) ကို အတုယူလာနိုင်ပါတယ်
မာကယ်လ်က ပြီးခဲ့တဲ့ ကိတ်မစ်ဒယ်တန်ရဲ့ နာမည်ကြီး ကိုယ်တိုင်မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်ခဲ့သလို ပြင်ဆင်လာမလားဆိုတာကတော့ မသေချာသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မာကယ်လ်ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တုန်းက Uber ပေါ်မှာ Bobbi Brown နဲ့အတူ Backseat Beauty Tutorial တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် အခု မင်္ဂလာပွဲမှာလည်း Bobbi Brown Cosmetics တွေကိုပဲ အသုံးပြုလာမယ်ဆိုတာက ကျိန်းသေသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တော်ဝင်မိသားစုဝင် အလောင်းအလျာလေး မီဂန်မာကယ်လ်ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲမိတ်ကပ်ကတော့ မိန်းကလေးတွေ အားကျရလောက်အောင် လှပနေမှာကတော့ သေချာပါတယ်။
Ref : Elle.com
မီဂနျမာကယျလျ (Meghan Markel) မင်ျဂလာပှဲမှာ ဘယျလိုမိတျကပျပုံစံနဲ့ ပွငျဆငျလာမလဲ?
တျောဝငျမငျးသားခြော ဟယျရီနဲ့ မီဂနျမာကယျလျ (Meghan Markel) တို့ရဲ့ လာမယျ့ မလေ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပတော့မယျ့ တျောဝငျမင်ျဂလာပှဲသတငျးတှကေတော့ အခုအခြိနျမှာ မင်ျဂလာကိတျအရသာ ကအစ လာရောကျမယျ့ ဧညျ့စာရငျး၊ ဖွဖြေျောမယျ့သူတှအေထိ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ သတို့သမီးက ဘယျလိုမြိုး မိတျကပျပွငျဆငျလာမလဲဆိုတဲ့အပျေါမှာကတော့ လုံးဝကို မသိရသေးဘူးပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့တော့ မီဂနျမာကယျလျ (Meghan Markel) က ဘယျလိုမြိုး မင်ျဂလာပှဲမှာ အလှပဆုံးပွငျဆငျလာမှာလဲဆိုတာ အရငျမှနျးကွညျ့ရအောငျ။
သဘာဝကကြနြဲ့ Classic ပုံစံမြိုးပွငျဆငျလာမယျ
မာကယျလျရဲ့ မိတျကပျပညာရှငျအနနေဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈကနေ ၂၀၁၇ ခုနှဈအထိ အတူရှိနခေဲ့တဲ့ Lydia Sellers ကတော့ မာကယျလျက သူမအခုနောကျပိုငျး ပွုလုပျဖွဈနတေဲ့ အခြိနျအပိုငျးအခွားကနျ့သတျခွငျးမရှိတဲ့ Classic စတိုငျ မိတျကပျကိုပဲ ဝတျဆငျလာဖွဈမယျထငျတယျလို့ People မဂ်ဂဇငျးနဲ့ အငျတာဗြူးမှာ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ သဘာဝကကြတြောကျပနတေဲ့ အသားအရနေဲ့ ပနျးရောငျဖြော့ဖြော့နှုတျခမျး၊ Daytime Smoky Eye တှနေဲ့ လှပတဲ့မကျြတိုငျတှနေဲ့ မာကယျလျက လှပနမှောပါလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
သူမရဲ့ အကွိုကျဆုံးထုတျကုနျတှကေိုပဲ အသုံးပွုမယျ
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှမှော မာကယျလျက သူမရဲ့ အကွိုကျနှဈသကျဆုံးသော အလှပဆိုငျရာထုတျကုနျတှကေို အငျတာဗြူးတှမှော ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီထဲမှာ YSL Touche Éclat Concealer ၊ Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick in Very Victoria ၊ NARS Orgasm Blush ၊ Dior Diorshow Iconic Mascara နဲ့ M.A.C eyeliner in Teddy တှပေါဝငျပွီးတော့ အခုမင်ျဂလာပှဲမှာလညျး အဆိုပါ ထုတျကုနျတှနေဲ့ပဲ ပွငျဆငျလာဖို့ မြားတယျလို့ ခနျ့မှနျးလာကွပါတယျ။ မာကယျလျကိုယျတိုငျကလညျး သဘာဝထုတျကုနျတှကေို ရိုးရှငျးပွီး စဈမှနျတာကွောငျ့ တနျဖိုးထားပွီး သုံးစှဲတတျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈတယျလို့လညျး Sellers က ပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
သူမရဲ့ အသားအရကေိုအဓိကထားပွီး ပွငျဆငျလာမယျ
ပွီးခဲ့တဲ့ Refinery 23 နဲ့ အငျတာဗြူးမှာ Sellers က မာကယျလျကို မိတျကပျပငျဆငျပေးတိုငျး အောကျခံဖောငျဒရှေငျးတှေ အမြားကွီးသုံးတာကိုမကွိုကျပဲ သူမရဲ့ တောကျပနတေဲ့ ပငျကိုယျအသားအရကေိုပဲ အဓိကထားဖို့ ပွောဖူးတယျလို့ ပွောကွားခဲ့ပွီးတော့ အခု မင်ျဂလာပှဲမှာလညျး မာကယျလျက သူမရဲ့ အသားအရအေတှကျ အကွိုကျဆုံးထုတျကုနျတှဖွေဈတဲ့ Kate Somerville Quench Hydrating Face Serum ၊Bioré Daily Deep Pore Cleansing Cloths နဲ့ Tatcha Rice Enzyme Powder တှကေို အသုံးလာနိုငျခွမြေားတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
ကိတျမဈဒယျတနျ (Kate Middleton) ကို အတုယူလာနိုငျပါတယျ
မာကယျလျက ပွီးခဲ့တဲ့ ကိတျမဈဒယျတနျရဲ့ နာမညျကွီး ကိုယျတိုငျမိတျကပျပွငျဆငျခဲ့သလို ပွငျဆငျလာမလားဆိုတာကတော့ မသခြောသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ မာကယျလျဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈတုနျးက Uber ပျေါမှာ Bobbi Brown နဲ့အတူ Backseat Beauty Tutorial တဈခုပွုလုပျခဲ့ဖူးတဲ့အတှကျ အခု မင်ျဂလာပှဲမှာလညျး Bobbi Brown Cosmetics တှကေိုပဲ အသုံးပွုလာမယျဆိုတာက ကြိနျးသသေလောကျဖွဈနပေါတယျ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ တျောဝငျမိသားစုဝငျ အလောငျးအလြာလေး မီဂနျမာကယျလျရဲ့ မင်ျဂလာပှဲမိတျကပျကတော့ မိနျးကလေးတှေ အားကရြလောကျအောငျ လှပနမှောကတော့ သခြောပါတယျ။